အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်းကြံ့ခိုင်ရေး app ကို | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်း
အပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်း APK ကို
အဘယ်သူသည်အားကစားရုံလိုဦးမှာလဲ အတူအိမ်မှာပုံသဏ္ဍာန်ထဲမှာ Get လေ့ကျင့်ခန်း & စီမံကိန်းများကို Fitify မှ။
ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသငျသညျယလေ့ကျင့်ခန်းသာ bodyweight သင်တန်း (မျှပစ္စည်းကိရိယာများ!) ကို အသုံးပြု. နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ကျနော်တို့အထဲကဒီမှာသာ app ကိုဖြစ်သကဲ့သို့, မထိုက်မတန် tools များနှင့်အတူလည်းယလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်စီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့:
•ဆွစ်ဇာလန် Ball ကို
•ရေမြှုပ် RollerFitify ရန်သင့်အဆုံးစွန်ပြည့်အဝခန္ဓာကိုယ်လေ့ကျင့်ခန်း App ဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်အလေးချိန်, အဆီကိုမီးမရှို့, ကြွက်သားတည်ဆောက် & အစှမျးသတ်တိ။ နှင့် 850 လေ့ကျင့်ခန်းကျော် အလုပ်ထုတ် app ထဲမှာ, သင့်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အစဉ်အမြဲလတ်ဆတ်တဲ့, ပျော်စရာ & ထိရောက်သောများမှာ! မဆိုထိုက်မတန် tool ကိုသုံးပြီးဘယ်နေရာမှာမဆိုအချိန်မရွေးထွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမပစ္စည်းကိရိယာများလိုအပ်ပေမယ့်သင်တဦးတည်းရှိပါက - က၏အားသာချက်ယူပါ!ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သနည်း
•လူတစ်ဦးချင်းကြံ့ခိုင်ရေးအစီအစဉ် - သင့်အတွေ့အကြုံ, ရည်မှန်းချက်နှင့်အချိန်ရွေးချယ်မှုများပေါ် အခြေခံ. ထုံးစံလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကို။ တစ်ခုချင်းစီကိုယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုသင်အကောင်းဆုံးရလဒ်များကိုရရှိရန်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြံ့ခိုင်ရေးအဆင့်အပေါ်အခြေခံပြီးဖန်တီးထားသည်။
• 15 မိနစ်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း
• 850 bodyweight & မထိုက်မတန် tools တွေကိုကျော်တင်ပြသော - ဒါယလေ့ကျင့်ခန်းအမြဲပျော်စရာထူးခြားတဲ့နှင့်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်
• 20 + prebuilt လေ့ကျင့်ခန်း - သင်တန်းနှင့်ကြာချိန်အမျိုးအစားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းကိုရှေးခယျြ
• 15 + prebuilt ပြန်လည်နာလန်ထူအစည်းအဝေးများ - န့ ်. , ယောဂနှင့်ရေမြှုပ် Rolling အတန်း
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးမားသောစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဒေတာဘေ့စမှသင်၏ကိုယ်ပိုင် "စိတ်တိုင်းကျလေ့ကျင့်ခန်း" ကိုတည်ဆောက်ရန်•စွမ်းရည်
•ရှင်းရှင်းလင်းလင်း HD ဗီဒီယိုဆန္ဒပြပွဲများ
လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် Recovery ကိုအစည်းအဝေးများအပြည့်အဝ•အပတ်စဉ်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်
•လေ့ကျင့်ခန်းသာဖြည့်စွက်ရန် 15-25 မိနစ်ယူပါ။
•လွယ်ကူသော-to-အတိုင်းလိုက်နာသောဗီဒီယိုလေ့ကျင့်ခန်းအတူ HIIT, Tabata, အစွမ်းသတ္တိသင်တန်းများ, Cardio နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအစည်းအဝေးများ။
သငျသညျ bodyweight go သို့မဟုတ် Kettlebell ကဲ့သို့သော tool ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ, သင်ကအစီအစဉ်အတိုင်းလိုက်နာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ prebuilt လေ့ကျင့်ခန်းမဆို run ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်, သင်တန်းအမျိုးအစား, ကြာချိန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါပဲ။
• Fullbody လေ့ကျင့်ခန်း
•ရူးသွပ်ခြောက် Pack ကို
• Strong သို့ပြန်သွားရန်
• Complex အောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်
• Explosive ပါဝါ Jump
• Complex အထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်
• Monster ရင်ဘတ်
•ပခုံး & အထက်ပိုင်းသို့ပြန်သွားရန်
•အလင်း Cardio (LISS)
• Cardio-ခွန်အား Interval
• Balance & ညှိနှိုင်းရေး
•သိပ္ပံ7မိနစ်
• Fullbody လေ့ကျင့်ရေး
recovery ကို Sessions
• Runners ဆိုတဲ့အဘို့အယောဂ
• Back ကိုအမြှုပ် Rolling
သင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတူတူဘယ်တော့မှမဖြစ်ဒီတော့ Blender feature ကို default အနေဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်ဆဲသင့်ရဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးခရီးအပေါ်လှုံ့ဆော်နေဒါတစ်ခုချင်းစီယလေ့ကျင့်ခန်းလတ်ဆတ်နှင့်ပျော်စရာပါပဲ။
Fitify များ၏ download, နှင့်အသုံးပြုမှုတာဝန်ခံအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်းသွင်းခြင်းအပေါ်အခြေခံရရှိနိုင်သည့် Pro ဗားရှင်း, နှင့်သင်၏လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်နှင့်အပို features တွေရယူလိုက်ပါ။ သင်အမြဲ / Subscriptions Google Play ကအတွက်ဒီမှာ subscription ကိုပယ်ဖျက်နိုင်သည်။ သငျသညျကိုပယ်ဖျက်ရန်သောအခါ, Pro ကို features တွေဝင်ရောက်ခွင့်လက်ရှိငွေပေးချေကာလရဲ့အဆုံးမှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ သက်တမ်းတိုးသည့်အခါစျေးနှုန်းမတိုးမြှင့်ရှိပါသည်။ ကျနော်တို့အာမခံ 10 ရက်ပေါင်းပိုက်ဆံပြန်သည်။
အဆုံးဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အကျေးဇူးတင်ပါသည်ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူ fit 💙💪
Dumbbell & လေ့ကျင့်ခန်းကိုလည်း 🏋️♂️
နယူးကြံ့ခိုင်ရေး tools တွေ! အခြို့သောအလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျအသင့်ဖြစ်ပြီလား? သင်၏အခမဲ့အလေးများအတွက်အထိရောက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းလေ့လာပါ။
နယူး Bodyweight စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ????
ကျနော်တို့ ပို. ပင်ကွဲပြားခြားနားသည်သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်စောင့်ရှောက်ဖို့ 19 သစ်ကို bodyweight လေ့ကျင့်ခန်းကဆက်ပြောသည်ပါတယ်။
အထဲကအလုပ်လုပ်ဂီတနှင့်အတူကပိုပျော်စရာဖြစ်တယ်, ဒါယခုသင်သည် app ကနေတိုက်ရိုက်ငါတို့လက်-လက်ရာမြောက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ယလေ့ကျင့်ခန်းဖွင့်စာရင်းများကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
77.78 ကို MB
Fitify ယလေ့ကျင့်ခန်း SRO